Torohevitra izay sarotra tanterahana indrindra eto ambonin’ny tany io ary matetika aza dia ireo olona tena mpanome ny torohevitra no voalohany amin’ireo tsy mahatsapa tena fa tokony hiova ihany koa. Tsy ny lafiny politika ihany no ahitana an’io fa ny lafiny rehetra mihitsy. Iny izao resy ny ekipam-pirenen’ny baolina kitra dia voambolana ny hoe tsy mahay na hoe tokony ho ranona no nampanaovina. Rehefa mahomby indray dia hoe vintana. Tsy afaka ny hanao jery miabo mihitsy ve ? Eo amin’ny lafiny politika moa dia rehefa tsy mahay ny mpitondra ho an’ireo izay tsy nifidy azy fa ho an’ireo izay nifidy kosa dia mety foana ny ataon’io fitondrana io na dia efa tazana izao fa mitantana ho any an-kady. Efa mba nametra-panontaniana ve isika olompirenena hoe inona no nataoko ho an’ity fireneko ity, toy ilay fehezantenina filoham-pirenena amerikanina iray izay ? Fa maninona moa isika no tsy an-dalam-pandrosoana intsony fa an-dalam-pihemorana lava ? Mahay mifamelona ve isika sa miha mifanohitra amin’izay ? Mila manova tanteraka amin’ny lafiny rehetra kosa angamba fa tsy toe-tsaina ihany.